Muxuu Rooble ku tilmaamay weerarka lagu qaaday xarunta BFS? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu Rooble ku tilmaamay weerarka lagu qaaday xarunta BFS?
RW Rooble ayaa ujeeddada weerarkii hoobiyayaasha ku tilmaamay inuu ahaa mid fuleynimo ah oo lagu cabsi gelinayey Baarlamaanka, si loo carqaladeeyo dhameystirka doorashooyinka dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa cambaareeyay weerarka madaafiicda ah ee maanta lagu qaaday Xarunta Golaha Shacabka, xilli Labada Gole ee Baarlamaanku lahaayeen kulan wadajir ah oo lagu ansixinayay ajande muhiim u ah dhameystirka doorashooyinka dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta, wuxuu weerarka ku tilmaamay mid la doonayay in lagu carqaladeeyo shaqada Baarlamaanka Federaalka ah, isagoo ku macneeyay fal fulaynimo ah oo lagu cabsi-galiyay Baarlamaanka oo ku guda jira waajib gudashadiisa dastuuriga ah si loo cuuryaamiyo in doorashadu deg deg u dhammaato.
RW Rooble, wuxuu Guddoonka KGM ah ee Golayaasha iyo Guddoonnada qaban qaabada doorashada ku bogaadiyay dadaalkooda ku aaddan dhammaystirka iyo dardargalinta doorashada, si dalku uga baxo jahawareerka siyaasadeed iyo amni xumada uu ku jiray shanti sano ee la soo dhaafay.
Ciidamada Qalabka Sida iyo Taliyeyaasha Ciidammada ayuu faray in ay laba-laabaan dadaalkooda ku aaddan suggidda amniga iyo hortagista isku day kasta oo lagu carqaladaynayo amniga dalka, gaar ahaan xilligaan lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, wuxuu hore u sheegay in Madaxweynihii hore Farmaajo, uu seynta uga taagan yahay dhameystirka doorashooyinka, hayeeshee, wuxuu muujiyay in uusan middaas dhag u dhigi doonin, dhawaanna la soo af-meeri doono doorashooyinka dalka.